Midowga Afrika oo si kulul uga hadlay dagaalkii Beled-Xaawo - Awdinle Online
Midowga Afrika oo si kulul uga hadlay dagaalkii Beled-Xaawo
Guddoomiyaha Midowga Afrika Mousa Faki ayaa sheegay inuu la socdo xiisada ka taagan xuduudka Soomaaliya iyo Kenya, kadib dagaal shalay halkaasi ku dhex-maray Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitte-ka ayaa waxaa uu ku sheegay inay ka walaacsan yihiin xiisadaas & dagaalkii dhacay, waxaana uu ugu baaqay dowladaha Soomaaliya & Kenya inay xiisada dejiyaan.
“Waxaan si taxaddar leh ula socdaa xiisadaha ka taagan xadka Kenya & Soomaaliya, waxaanan ka codsanayaa labada deris ah inay is xakameeyaan oo ay wadahadal la galaan si waafaqsan hannaanka IGAD . Nabadda xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa muhiim u ah xasiloonida gobolka ayuu yiri” Mousa Faki.
Previous articleCabsi kajirta Magaalada Mandheera iyo dad ka barakacaya
Next articleMadaxweyne Qoor Qoor oo diiday dalab ka yimid dhinacyada Puntland & Jubbland